Ny Fomba Nanosehan’ny Media Sosialy Ny Fankafizan’ireo Shinoa Ny Fandidiana Fanovàna Endrika · Global Voices teny Malagasy
Ny Fomba Nanosehan'ny Media Sosialy Ny Fankafizan'ireo Shinoa Ny Fandidiana Fanovàna Endrika
Voadika ny 28 Oktobra 2015 15:57 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, polski, Español, Català, عربي, русский, bahasa Indonesia, 日本語, македонски, Ελληνικά, English
Sary an'i TeeLamb. CC BY-NC-SA 3.0
Tao anatin'ny roapolo taona latsaka fotsiny, nitombo be tsy nisy toy izany ny fandidiana fanovàna endrika tao Shina. Niova ho vokatra fanjifa ny dingana medikaly, noho ny hamaroan'ireo dokambarotra mankalaza ny hatsaran-tarehy fenitra ao Azia, ary ny tetikadim-barotra ety anaty media sosialy izay nanangana vondrom-piarahamonina iray “mandrisika” ny vehivavy hanova ny tarehiny sy hatramin'ny fiainany mihitsy.
Araka ny tomban'ny indostria misahana fandidiana fanovàna endrika ao Shina, nisy 140 tapitrisa ireo mpanjifa goavan'ny fandidiana fanovàna endrika tamin'ny 2014. Iray isaky ny endrika arivo no nandalo fikarakarana fandidiana goavana na kely, ary roa isaky ny arivo no efa nihevitra fa handeha horasain'ny antsy.
‘Tsy hoe manova ny endrikao fotsiny, fa manova ilay ianao ao anaty mihitsy’
Mino ireo mpandàla ny fotokevitr'i Conficius fa zava-dehibe tokoa ny fanabeazana ara-panahy noho ny arak'endrika. Saingy nandalo fotsiny izay hevitra izay tamin'ny fomba fijery manjaka eny anivon'ireo Shinoa tanora manao hoe ny bikanao dia afaka mamaritra ny lahatrao. Araka ny fomba fisainan'ny besinimaro, ny fanitsiana ny endrika, na ny oronao izany, na ny hodimasonao, dia mety koa hahalasa ny fiainanao ho tsaratsara kokoa.
Naverina nozarazaraina tao amin'ny media sosialy Shinoa, eny anivon'ireo tanora tovovavy, ireo tantaran'ny fomba itondran'ny endrika iray nasiam-panovàna ho any amin'ny hoavy mamiratra :
Tsy hanova fotsiny ny fiainanao ny bika tsara tarehy, fa ny maha-ianao anao. Hotahiana anie ianao, manàna fiainana sy ho avy mahafinaritra.
Matetika ny olona miteny hoe ny fijanonanao ho tanora ao am-ponao no afaka manome endrika tanora anao. Raha tena marina tanteraka izany, ilainao ny manana toepo tsara mba hitazonanao ny tenanao ho tanora foana ao am-po. Betsaka ny fomba hitazonana ny toeponao, fa ny tena ilaina indrindra dia ny fahafahanao mankasitraka ny tenanao. Raha misy olona mijery fitaratra ka mahatsiaro ho ratsy, ahoana no hahafahan'izay olona izay hanana fijery miabo momba ny fiainany sy hijanona ho tanora? Noho izany, mijanòna ho tanora ao am-po ary dia hanaraka an'izay ny endrikao ivelany.
Ny fijerenao ny tenanao miha-tanora, tsara kokoa, iza no hiraharaha na voatrolombelona io na voajanahary? Farafaharatsiny aloha mba tena faly aho izao.
Fanitrikitrihana mitovy amin'izany no hita ao amin'ny soyoung.com, sehatra iray manome tolotra fandidiana fanovàna endrika, ahafahan'ireo mpampiasa azy mampakatra ny sarin'izy ireo sy mizara ny fomba niainany ny fandidiana ao anaty diary iray ety anaty aterineto. Masoivoho iray mpanao fandidiana fanovàna endrika no mitantana ilay sehatra, mba hampahafantarany ireo fomba fifantenana; mampifandray mivantana ireo mpitsabo sy hopitaly ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina amin'ireo mpanjifany izy io, ary manome fahafahana ireo mpanjifa mba hahazo fizahana fahasalamana atao ety anaty aterineto, ary mandraikitra fotoana.
Tao anatin'ny taona roa, nahazo fisoratana anarana efa maherin'ny 600.000 ilay sehatra anaty-sy-ivelan'ny serasera, ary nanamora ny fanaovana fandidiana fanovàna endrika niisa 2.000 tamin'ny fivoahany nanatona ireo mpanjifany. Misy ampolony raha kely indrindra ireo sehatra mitovitovy amin'io no manampy ilay indostria hampiroborobo ny tolotra ara-pitsaboana ataony.
Ny herin'ny tetikadim-barotra anaty media sosialy
Manamafy ny hatsaran-tarehy fenitra ao Azia ny fisian'ieo lasitra tsara bika any anaty dokambarotra — hoditra fotsy, hodimaso roa, orona lava sy mahitsy, tava mibika atody, nono be, fe lava sy marotsaka. Ary ireo fampiasa anaty finday ahafahanao manova ny endrikao dia manamafy fotsiny ny fakàmpanahy hahazo izay hatsaran-tarehy ‘mampitsiriritra’ izay.
Ny hevitra atosiky ny indostrian'ny hatsaran-tarehy dia hoe tsy misy vehivavy ratsy tarehy izany, fa ireo vehivavy kamo izay tsy manao fandidiana fanovàna sahaza azy mba hanaraka fenitra. Saingy tsy hoe nahomby mandrakariva ireny fandidiana ireny, fa tsy misy hatreto sehatra media sosialy mitovy amin'izany, natokana hizaràna traikefa niainana fandidiana natao tamin'ny fomba tsizarizary.
Tatitra fanadihadiana iray avy amin'ny Initium, sehatra iray mpizara vaovao ao Hong-Kong, no namaky bantsilana hoe mampiasa tetikadim-barotra matanjaka ety anaty media sosialy ny indostrian'ny fandidiana fanovàna endrika mba hamafàna ireo fitarainana sy hamoronana toetsaina iombonan'ny tarika eny anivon'ireo mpanjifa goavana.
Araka ny lazain'ilay olona tsy mitonona anarana, mpanjifan'ny mpandidy iray malaza ao anatin'ilay tatitra, tafiditra taminà raharahanà fandidiana nisy hadisoana teo ampikikisana taolana ilay mpitsabo azy, izay niteraka fahasembanana goavana ho anà mpanjifa iray hafa. Na teo aza io, vitan'ny tarika mpanao tetikadim-barotr'ilay dokotera ety anaty media sosialy ny nandresy lahatra azy sy ireo mpanjifa goavana hafa hoe honohono manimba zavatra naelin'ireo mpifaninana aminy fotsiny ilay vaovao. Talohan'ny nandraisan'ny loharanom-baovao fanapahankevitra hanaisotra ilay zotra arahana amin'ny fikikisana taolana, niditra ho mpikambana tamin'ny vondron'ireo mpanjifan'ilay mpitsabo izy, tao amin'ny sehatra media sosialy QQ. Nahatonga azy nanadino ny loza goavana mety hihatra aminy ireo fanehoankevitra miabo sy fientanentanana ary fahavonoana'ireo mpanjifa hiatrika ny fandidiana.
Natao tsinontsinona ny feon'ireo niharam-boina
Tsy vonona ny hizara ny zavatra mangirifiry iainany ny ankamaroan'ireo niharam-doza taminà fandidiana tsizarizary, satria zara raha mahazo ny fitseran'ny olona izy ireny. Ireto fanehoankevitra manaraka ireto no somary niavaka, tao amin'ny tatitry ny bilaogy miresaka ny fomba fiainan'ny Shanghaiist, momba ireo andiana hetsi-panoherana tao Seoul, Korea Atsimo, nataon'ireo niharan-doza taminà fandidiana tsizarizary :
Tsy manana fitserana ho an'ireo olona babon'ireny zavatra ‘faran'izay moravidy’ ireny aho. Ok tsy manana ny fahaizamanao toy ny an'ireo tena mpandidy manampahaizana ireo mpandidy mpanova endrika, nefa mbola ilàna asa mafy sy fiofànana ny fanaovana azy io, raha toa kahidy ny olona momba azy io dia mitady ny tsy handaniany vola fa mampiasa mpandidy mampiahiahy, avy eo ry zareo indray no miseho mamely ireo sasany nanao ny mety, nianatra ny fanaovana azy io araka ny tokony ho izy ary tena mamiratra amin'izany. Na izany na tsy izany, hàlako ny fandidiana fanovàna endrika, saingy mitoetra foana ny fotokevitro. Mety tena mijaly kokoa noho ireo firenena hafa manankarena i Shina amin'io toetsaina io, manao hoe ‘nahoana no handany volabe handoavana karaman'olona iray izay tena mahay tsara ny zavatra ataony’.
Teraka tao anaty endrika iray sy hoavy efa voafaritra ny olona. Toheriny ve izany ny endrik'ireo ray aman-dreniny? Misy fahasamihafàny ny hoe fandidiana taorian'ny loza nihatra mba hanarenana ny endrika simba, sy ity eto ity. Tsy misy ilàna azy no sady manimba ito.
Na dia ampy fahavononana aza ireo niharan-doza hiatrehany ny fanatsinkafonan'ny daholobe sy hitantaràny ny tantaran'izy ireo, matetika ny feon'izy ireny no difotry ny fandraharahàna mampiasa tetikadim-barotra atosiky ny fikatsahana tombontsoa ety anaty media sosialy. Ny tsy fifandanjan'ny torohay dia taratry ny vokadratsin'ny politikan'ny aterineto ankehitriny ataon'ny governemanta Shinoa, izay mandrisika ny fitomboan'ny fandraharahana ety anaty aterineto, raha toa kosa ka mamono ny firoboroboan'ireo vondrom-piarahamonina virtoaly, toy ireo izay manokan-tena amin'ny fiarovana ny vehivavy, ny mpanjifa ary ny olana momba ny zon'ny olompirenena, izay afaka hanome hery tsara ny olona tsotra mba haneho ny heviny.
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity koa i Ayo Awokoya.